Museveni: Khasaaro xoogan ayaa naga soo gaartey weerarkii Al-Shabaab
KAMPALA, Uganda - Madaxweynaha Uganda, Yoweri Kaguta Museveni ayaa daboolka ka qaadey khasaaraha rasmiga ah ee Ciidamada dalkiisa kasoo gaarey weerarkii Buula-Mareer.
Museveni ayaa xaqiijiyay in 8 Askari looga dilay weerarka ka dhacay Axadii Buula-mareer, kaasi oo isagu jiray qaraxyo loo adeegsaday baabuur walxaha lagu soo xiray iyo dagaal toos ah oo lagu qaadey Askarta Uganda.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-kiisa ayuu ku yiri Museveni: Nasiib darro, 2 gaari oo walxaha qarxa lagu soo xiray ayay cadowga ku weerareen saldhigga, mid kamid ah ayaa dilay 8 kamid ahaa Askarteena.
Madaxweynaha Uganda ayaa uga tacsiyadeeyay qoysaska wiilashooda ku waayay weerarka.
"Noloshooda nabad waarta haku nagaado. Waxaan tacsi u dirayaa qoysaska Askarti nalooga dilay Soomaaliya," ayuu hadlkiisa raaciyay Museveni.
Hadalka Museveni ayaa khilaafaya tiradadii uu horey u shaaciyay Afhayeenka Ciidamada Uganda Brigadier Richard Karemire, oo sheegay in 4 Askari looga dilay weerarka, 6 kalena ay uga dhaawacmeen.
Brig Karemire ayaa Wariye-yaasha u sheegay shalay in Askarta dhaawaca ah ay xaaladooda soo wanaagsanaanayso, islamarkaana ay ku jiraan Isbitaallka AMISOM ee magaalada Muqdisho.
Brigadier Karemire waxa uu xusay dhanka kale in Al Shabaab ay uga dileen weerarka 30 xubnood, iyadoo Museveni uu sheegay in 36 la dilay.
Kooxda ay xaqiijiysay in 14 ay ku waysay howlgalka Muula-Mareer ka fulisay, kaasi oo ahaa mid midkii ugu khasaaraha badnaa oo Ciidamada Uganda lagu qaado tan iyo billowga sanadkan 2018-ka.
Dalalka Geeska Africa ayaa ugu deeqay howlgalka Midowga Africa ee AMISOM 22,000 oo Askari kuwaasi oo mudo 10 sano ah dagaal kula jira Al Shabaab, iyadoo wali aysan ku guuleysan inay nabadeeyaan dalka.
Weerarka ayaa ku billowday qaraxyo waaweyn, oo ka dhacay afaafka saldhigga...
Al-Shabaab oo weerartay Markab fadhiya Dekada Baraawe
Soomaliya 22.07.2018. 19:38
Weerar culus oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose
Soomaliya 16.08.2018. 11:54